musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Kutya kwe COVID-19 Mhando mukudonha
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo Yepamusoro Institute yehutano (HIH) muItari iri kusimudza alarm apo zvivakwa zvekuchipatara zvinoramba zvakaderera. Iyo muzana yezviitiko zvakanaka iri kukonzera kutya kweECOVID-19 akasiyana Kappa neDelta, kunyanya yekupedzisira, iyo yakakwira kubva pa5.2 muzana muna Chivabvu kusvika 27.7 muzana Chikumi.
Chirevo chitsva kubva kuHIH pamusoro pekupatsanurwa kwemisiyano iri kudaidzira kuti "kutarisisa kukuru" kubhadharwe kutenderera kweizvi zvimwe zvinotapukira.
Mushonga wechitatu uri kurongwa kurwisa aya COVID-19 akasiyana.
Muna Gumiguru, kuchave nekudzoka kwekupararira kwehutachiona, zvakasiyana ne2020, uye kunyanya avo vasina kubayiwa vachaguma vachengetwa zvakanyanya.
"Wechitatu mushonga wejekiseni iri mune zvirevo, asi hatizive kuti ndiani uye ndiani," akadaro General Director wekuDzivirirwa kweItari Ministry yehutano, Gianni Rezza.
"Kubayiwa kwechitatu kurwisa COVID-19 kuri kuongororwa, kunyangwe isu tisati taziva kuti riini, sei, uye kunaani," Rezza akatsanangura panguva yemusangano wevatori venhau pamusoro pekuongororwa kwedata pane COVID-19 redunhu kuongorora.
"MunaGumiguru, kuchave nekudzoka kwekupararira kwehutachiona, zvakasiyana ne2020, uye kunyanya avo vasina kubayiwa majekiseni vanozopedzisira vava munzvimbo yevanonyanya kurapwa," akadaro Undersecretary for Health, Pierpaolo Sileri. “Njodzi ndeyekuti hutachiona hunotenderera pakati pevana vasina kubayiwa majekiseni uye [avo] vanopfuura makore makumi matanhatu, nevekupedzisira vari panjodzi yekuzopedzisira vari munzvimbo yevanonyanya kurwara. Ndichiri kufa necoronavirus kuva nejekiseni zvinoita kunge benzi kwandiri. "Tine chombo chekudzivisa kufa icho gore rapfuura chaisave nacho."
Delta Variant: Zvinhu Zvokuziva
Iyo Delta musiyano, iyo ine huwandu hwehutachiona hwe60 muzana inopararira kupfuura mamwe hutachiona hwehutachiona, iri kuwedzerawo muItari maererano nedhata rakaburitswa nebazi rezvehutano uye iyo yepamusoro Institute yehutano mukutarisa kwevhiki nevhiki.